वलिवूड नायिकालाई समेत पछि पार्ने नेपालका यी नायिकाहरु हेर्नुस तस्बिर सहित - Nawalpur Dainik
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नव नायिकाहरुको कमी छैन । नायिकाहरुको कुन बेला चर्चा हुन्छ र कुन बेला बिवाद हुन्छ भन्ने अत्ताेपत्ताे हुदैन् । तीमध्ये कतिले चलचित्र क्षेत्रमा सुरुवातमा नै सफलताको स्वाद चाखेका छन् भने कति संघर्षकै क्रममा छन् ।
नायिकाहरुले आफनो पहिलो प्रयासमा नै दर्शकको मन जिते छन् । कतिले अभिनयमाफर्त त कतिले सुन्दरतामार्फत । तीनै नायिकाहरुलाई कतिले बलिउड नायिकाहरुसंग तुलना पनि गर्छन अभिनयको हिसावले होईन रुपको हिसावले । ती नायिकाहरुलाई धेरैले बलिउड नायिकाको उपनाम दिएका छन् ।
एश्वर्य फेम नायिकाले आफनो डेब्यु चलचित्रबाट नै चर्चा कमाईन । फैसन इन्डष्ट्रीमा चिरपरिचित नायिका दिपिकालाई दर्शकले पहिलो चलचित्रबाट नै वच गरेका थिए । उनलाई धेरैले बलिउड सोनम कपुर भनेर टिप्पणी गर्छन ।
उनलाई बलिउडकी सोनम कपुर भनेर यस क्षेत्रमा मात्र होईन स्कुल कलेजदेखि नै सोनम कपुर भनेर जिस्काउने गरेको उनी आफैले पनि स्वीकार गर्छिन्
कृ चलचित्रबाट डेब्यु गर्न लागिरहेकी नायिका अदिती बुढाथोकीलाई पनि बलिउडकी चर्चित नायिकाको उपनाम दिईएको छ । सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय अदितीलाई धेरैले सनी लियोनी जस्तो भनेका छन् भने कतिले कैटरिना कैफ जस्तो । खास गरेर उनको बोल्ड तस्बिरका कारण सनीसँग तुलना गरिएको हो ।
तर उनी भने आफुलाई कुनै बलिउड नायिका जस्तो छु भन्नेमा भने विश्वास छैन । बलिउडका केही म्युजिक भिडियोहरुमा समेत काम गरेकी उनी बलिउडमा पनि संघर्षको क्रममा नै रहेकीछिन् ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा थुप्रै चलचित्रमा काम गरेर पनि खासै सफलता पाउन नसकेकी नायिका बर्षा सिवाकोटीलाई पनि सनि लियोनी जस्तै देखिने नायिका भनेर चर्चा गरिन्छ ।
उनले ग्लामरस तरिकाले गरेको फोटोसुटहरुमा उनी केही हदसम्म सनि लियोनी जस्तो देखिन्छिन भन्ने धेरैको धारणा पाईएको छ । तर उनलाई कसैले आफुलाई सनि लियोनी जस्तो भनेर गरेको टिप्पणी मनपर्ने बताएकी थिईन् ।
ड्रिम्स चलचित्रबाट अभिनयमाफर्त यस क्षेत्रमा प्रबेश गरेकी सन्ध्या केसी यतिबेला आफनो करियर स्थापित गर्ने सुरुमा लागिरहेकीछिन् । रुपले धपक्क बलेकी यी नायिकालाई चलचित्र क्षेत्रमा मिनी एश्वर्याको नामले बोलाउने गर्छन् ।
झट्ट हेर्दा कता कता एश्वर्याको झलक पनि पाउन सकिन्छ ।
Prevयी ७ कुरा भुलेर पनि भगवानसँग नमाग्नुहोस, नत्र अशुभ हुनेछ !
Next१६ तस्वीरमा हेर्नुहोस् मोडल मुनाको बोल्ड अवतार ! फोटो फिचर